✔ BS Player v1.12.164 Apk(for android) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
✔ BS Player v1.12.164 Apk(for android)
Posted on December 11, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
✔ BS Player v1.12.164 APK✔
(Credit To ​ဆော့ဖ်​ဝဲမြို့​တော်​”​အောင်​​ကျော်​ခိုင်​`ပုသိမ်​´)
Size: Varies with device | Android: Varies with device
အချို့ အရမ်းကြည်လင်တဲ့ mkv လိုဖိုင်မျိုးတွေက အခြား player တွေနဲ့
မဖတ်ပါဘူး အဲဒီအခါမျိုးမျာ BS player လေးက အဆင်ပြေစေပါတယ်
MX player ကတော့ လူသိများပါတယ် ဒါပေမယ့် BS လေးလည်း ကောင်းပါတယ်
အခုတင်ပေးလိုက်တာက နောက်ဆုံးထွက် november က ထွက်တာလေးပါ
​အောက်​က လင့်​ခ်​ မှာ​ဒေါင်းယူပါ။
★ BS Player အား ​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
← ✔ Samsung ဖုန်း S4,S3,Note2 ဖုန်းအတွက်​ IMEI ပြဿနာ ​ဖြေရှင်းနည်း✔
How to pass any Android Pattern Lockscreen without root !! ဖုန်း Unlock ဖြေရှင်းနည်း !! →